अनियमित संग भिडियो च्याट अन्तरक्रियाकर्ता
यस्तो सेवाको रूपमा "एक अन्तरक्रियात्मक कुराकानीका साथ भिडियो कुराकानी" तपाइँ वेब क्यामेरा प्रयोग गरेर च्याट गर्न सक्नुहुन्छ वास्तविक समयमा हाम्रो ग्रहको कुनै पनि कुनामा। एक पटक यो नवाचारले यसको प्रयोगकर्तालाई यसको असामान्यताको कारण आकर्षित गर्यो, किनकि यो अर्को शहर वा यहाँ पनि एक व्यक्ति संग कुराकानी गर्न धेरै रोचक छ।
केहि भिडीयो च्याटहरू प्रयोग गर्नको लागि, तपाईले दर्ता गर्न सोध्नु भएको छ, जुन तपाईंको समयको केहि मिनेट लाग्छ। दर्ता गर्नु अघि, तपाइँ वेब क्यामेरासँग च्याट गर्न रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ!
सबैभन्दा माथिल्लो भिडियो कुराकानी। कुनै विज्ञापनहरू छैनन्। त्यहाँ एक प्रिमियम मोड हो। तपाईं शहरहरू र यहाँका देशहरूको लागि अन्तर्रार्ताकर्ता छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, म भन्दै छैन कि त्यहाँ त्यहाँ तपाई एक कोड किन्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि प्रिमियम पहुँच दिनुहोस्।
त्यहाँ एक च्याट च्याट र केटीहरु संग सर्च्रेटहरुको एक ठूलो गुच्छ पनि छ।
कुराकानी गर्नुहोस् GYR-GYR! भिडियो चैट क्लासिक ईन्जिनियरिङ्मा मेलओओ बाट आधारित छ, भर्खर पृष्ठमा सम्मिलित छ। यो पृष्ठ कज़ाक भिडियो च्याटको रूपमा पोष्ट गरिएको छ, तर रूस वा यूक्रेनबाट अन्तरक्रियाकर्ता फेला पार्न कुनै पनि हस्तक्षेप छैन। अन्तर्क्रिया हेर्नको लागी एक सुविधाजनक विन्डो, अलार्म बटन, सबै कुरा जस्तो हुनुपर्छ।
यो कुराकानी एक नियमित रूसी भिडियो च्याट हो र आधुनिक युवतीको लागि संचारको माध्यम हो। यो कुराकानी धेरै सरल छ। दुई सञ्झ्यालले तपाईंलाई आफैं र तपाइँको अन्तर्क्रियाकर्तालाई तपाइँको मनिटरको स्क्रिनमा हेर्न अनुमति दिन्छ। अर्को, त्यहाँ एक वा अर्को इन्टरनेट को सन्देश पठाउन एक विन्डो छ।
साथै, तपाईं आफ्नो लिङ्ग, र वांछित अन्तरक्रियाको लिंग तोक्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि खोज तपाईले प्रदान गर्नुभएको डाटामा सीमित हुनेछ।
यो साइटले तपाइँलाई वेबक्यामसँग एकैसाथ धेरै कुराकानीकर्तासँग सम्पर्क गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो साइटमा तपाइँ आफ्नो अवतार चयन गर्न सक्नुहुनेछ, लिङ्ग, उमेर र शहर निर्दिष्ट गर्नुहोस्। एउटै प्यारामिटरहरू द्वारा, तपाईं अन्तरक्रियाकर्ता चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो साइट साथै सबै अन्य भिडियो च्याटले तपाइँलाई हाम्रो कुनै पनि शहरबाट नयाँ रोचक मान्छेसँग च्याट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो साइट तपाईलाई छोड्नु पर्छ भने, यदि तपाईं माइक्रोफोनमा र तपाईंको कम्प्युटरको वेब क्यामेराको पहुँच अनुमति दिने हिम्मत नगर्नु हुन्छ भने। यस साइटमा दर्ता गर्न, तपाईंले आफ्नो ई-मेल ठेगाना प्रविष्टि गर्न लगइन र लगइनको लागि पासवर्ड प्रदान गर्नु पर्दछ, त्यसपछि तपाई एक रोचक अन्तरवार्ताकर्ता छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यस साइटसँग आफ्नै नियमहरू छन्, त्यसैले, तिनीहरूसँग परिचित हुनु आवश्यक छ, त्यसैले अशाभ नगर्ने। तपाईं साथीहरू पनि मनपर्ने साथीहरूसँग मनपर्छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, कि हो, प्रशंसा भन्नुहोस्, अथवा यसको विपरीत, साइटको मध्यस्थमा भ्रामक व्यवहारको बारेमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ।
यो भिडियो च्याट मृत्यु भयो ..
यो अनुप्रयोग "एक सान्दर्भिक अन्तरक्रियाकर्तासँग भिडियो च्याट" ले तपाईंलाई नयाँ मित्र खोज्न वा केवल आफ्नो समयको आनन्द लिन मद्दत गर्यो। तपाईलाई आवश्यक थियो वेबकैम जोड्न र "सुरु" बटन थिच्नु भएको थियो। त्यस पछि, अनुप्रयोग तपाईंको लागि एक साझेदार चयन गरियो। यदि साझेदारले तपाइँलाई मन पराउनुभएन भने, तपाई सधैँ अर्को व्यक्तिको लागि खोजी जारी राख्न सक्नुहुनेछ।
यो अनुप्रयोग मध्यस्थता छैन, त्यसैले यस अवस्थामा तपाईं 18 बर्ष भन्दा माथिका मानिसहरु द्वारा हेर्न सकिन्छ भनेर दृश्यहरूबाट प्रतिरक्षा हुनेछैन। सबै च्याट कोठाहरूमा जस्तै, तपाइँ तुरुन्त पाठ सन्देशहरू आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।
यो अनुप्रयोग पनि मरेको छ, र मानिसहरू यसलाई अन्य सेवाहरूमा जान्छन्।
यो भिडियोच्याट पनि वेब क्यामेराको माध्यमबाट संचारको लागी हो। केहि पनि केहि नहीं - दुई भिडियो को लागि भिडियो, एक इन्टरनेट मा संदेश पठाने ​​को लागि एक खिडकियां, र एक नयाँ इंटरल्यूक्टर को खोज को क्षमता। सजिलो र प्रयोग गर्न सजिलो छ र पूर्व-दर्ताको आवश्यकता पर्दैन।
Videochat - roulette, तपाईंलाई घर छोडेर नगरी नयाँ मान्छेसँग कुराकानी गर्ने अवसर दिन्छ। साइटमा दर्ता गरे पछि, तपाईं "अन्तरक्रियाकर्ताका लागि खोज" बटन क्लिक गरी संचार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो साइटमा तपाईंले भिडियो प्रयोगकर्ता प्रोफाईलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले अन्तरक्रियाकर्ताको छनौटलाई सहयोग गर्नेछ।
यो साइट अंग्रेजीमा डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले, प्रयोगकर्ताहरूको अंग्रेजीको ज्ञान नहुने यो भिडियो च्याटको खण्डहरू बुझ्न गाह्रो छ। Videochat साथै सबै कुराले तपाइँलाई पाठ सन्देशहरू आदान प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ, साथसाथै अन्तरक्रियामा वास्तविक समय देख्न सकिन्छ।
भिडियो च्याट "चलोको कुरा" ले तपाइँलाई हाम्रो ग्रहको कुनै पनि कुनाबाट बिल्कुल अपरिचित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यो च्याट, एक माइक्रोफोन वा वेबक्यामे संग गर्न सक्नुहुन्छ। यस साइटको सेवा धेरै सजिलो छ, र दर्ता र अतिरिक्त कुराकानी सेटिङ्हरू आवश्यक छैन।
"एक अन्तरक्रियाकर्ता फेला पार्नुहोस्" बटन क्लिक गरेर तपाइँ कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, "चलो कुरा" प्रदान गर्दछ र Vkontakte प्रयोगकर्ताहरु मा संचार, तर यसको लागि तपाईं दर्ता गर्न आवश्यक हुनेछ। यस साइटमा सञ्चार धेरै सजिलो र सुखद छ!
यो च्याट रूसी रूट च्याटको बराबर छ, छिटो भिडियो डेटिङको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय सेवा। संचारको सुरु गर्नु अघि यो दर्ता गर्न सजिलो छैन, र यदि तपाई माइक्रोफोन र वेबक्यामेमा पहुँच अनुमति नदिनु हुन्छ - तपाईलाई यो साइट छोड्नु पर्छ।
सामान्यतया, च्याट सरल र प्रयोग गर्न सजिलो छ, त्यहाँ साइटमा अनावश्यक केही छैन, त्यसैले शुरुवातले रूल्ला च्याट यन्त्र सजिलैसँग क्रमबद्ध गर्नेछ।